Ny Teny fahenina : Aza mamono olona
"Aza mamono olona." Eksodosy 20:13
"Vonjeo izay entina hovonoina, ary enga anie ka mba harovanao izay mangozohozo efa ho mby eo am-pamonoana!" Ohabolana 24:11
Ampianarin’ny Baiboly antsika fa Andriamanitra no nanome ny aina. Ka raha vao «mikasika» ain’olona, dia manohintohina ihany koa ny zon’Andriamanitra. Hanadina momba ny vonoan’olona rehetra teto an-tany Izy.
Ankoatra ny vonoan’olona amin’ny endriny samihafa, dia zava-misy isanandro koa ny fanalana zaza, fanaperana ain’olona ambavahoana mijaly, famonoan-tena. Matetika ireny rehetra ireny no fanehoana famoizam-po, nefa na izany aza, dia tena fanimbana ny aina izay nomen’Andriamanitra antsika.
Ny kristiana dia tsy afaka hanery ny hafa hanaiky izay takany avy amin’ny fanambaran’Ilay Andriamaniny. Tokony hijoro nefa izy ho vavolombelon’ny sitrapon’Andriamanitra ho an’ny tsirairay. Alohan’ny zavatra rehetra, dia amin’ny ohatra asehony izy no hijoro ho vavolombelona rehefa mitondra fampaherezana vokatry ny fitiavana ananan’ny kristiana, ho an’izay alaim-panahy hanao fihetsika ateraky ny famoizam-po, hijoro ho vavolombelona rehefa miresaka aminy momba an’i Jesosy, Ilay fanantenany (1 Timoty 1:1).
Tamin’ny «toriteny teo an-tendrombohitra» dia nahariharin’i Jesosy tsara ny herin’io didy io: tsy ny famonoana ho faty ihany no melohiny, fa ny fahatezerana ihany koa, ny fandatsana, ny fitenenan-dratsy, ary na ny fanaovana tsinontsinona aza, izay matetika no manapotika. Ny ain’ny namana dia toy ny sisin-tany tsy azo dinganina. Ary efa manao izany sahady raha tezitra, mandatsa, miteny ratsy na mankahala ny namana. Fikasihana ny ainy izany.
Rehefa manaja io Teny fahenina io isika, dia toy ny manao ihany koa izay azontsika atao hanampiana ireo mavesatra entana. Mahasambatra ny kristiana ny manambara ny Filazantsara izay manafaka, ny manome fiadanam-po sy fiainana mandrakizay ho an’izay mino ny Tompo Jesosy.